ကျွန်တော်တို့ဘဝတလျောက်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ တကွေ့မဟုတ် တကွေ့ကြုံရမည့်အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးလာတဲ့အခါ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊အိမ်ထောင်ရေး စတဲ့ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှာ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကျဆင်းလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါ။ တက်တက်ကြွကြွ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်လိုက်တဲ့အခါ လူဟာ နေလို့ထိုင်လို့ ပိုကောင်းလာပါတယ်။ (၂) မိမိစိတ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ မိမိကိုယ်ကို သတိရှိရှိနဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုသတိရှိလာခြင်းဟာဖြင့် ပြသနာထဲ တဝဲလည်လည် မဖြစ်ပဲ Solutionsတွေကိုပဲ အာရုံ စိုက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (Meditation လုပ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိစိတ်ကို သိရှိလာပြီး ထိန်းကျောင်းတတ်လာပါလိမ့်မယ်။) (၃) လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါ။ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ Activities တွေ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းက မိမိရဲ့ Stress တွေကိုလျော့ကျစေသလို သူတို့တွေစီကလည်း အကူညီကောင်းတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ (၄) မိမိဝါသနာပါတာ၊ ပျော်ရွှင်တာတွေကို လုပ်ဖို့ အချိန်ပေးပါ။ ဒါကတော့ လူအများ မလုပ်မိကြတဲ့ အရာ
By လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း Saturday, November 20, 2021
မဟတ္တမဂန္ဒီသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဖခင်ကြီးအဖြစ် ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသော အလွန်ထူးခြားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တဦီး ဖြစ်သည်။ တခါက သူသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို အကူအညီပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတခုအတွက် ရန်ပုံငွေစုဆောင်းရန် မြို့ရွာအသီးသီးသို့ ခရီးထွက်ခဲ့သည်။ နေရာများစွာသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းရှိ ပြည်နယ်တခုဖြစ်သည့် Orissa(Odisha) သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူသည် Orissa တွင် လူထုအစည်းအဝေးပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူက လူထုကို မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး အဖွဲ့အစည်းအတွက် ရန်ပုံငွေ ကူညီထည့်၀င်ရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူ့မိန့်ခွန်းအဆုံးမှာ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်နေသော အဝတ်အစားများ ၀တ်ဆင်ထားသည့် အဘွားအိုတဦး မတ်တပ်ထရပ်သည်။ သူမက ဂန္ဒီအနား သွားရောက်ခွင့်ပြုရန် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများကို တောင်းဆိုသည်။ သို့သော် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများက သူမကို သွားခွင့်မပြု။ သူမက အလျှော့မပေး။ လုံခြုံရေး၀န်ထမ်းများနှင့် အတိုက်အခံပြုပြီး ဂန္ဒီထံ အရောက်လာခဲ့သည်။ သူမသည် မဟတ္တမဂန္ဓီ၏ ခြေအစုံကို လက်ဖြင့် ထိလိုက်သည်။ ထို့ နောက် ကြေးနီအကြွေစေ့ တစေ့ကို သူမ၏ဆာရီထဲမှ ထုတ်ယူ၍ ဂန္ဒီ၏ ခြေရင်း၌ ထားလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဂန္ဓီအနားမှ ထွက်ခွာသွားသ
By လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း Thursday, November 04, 2021
ဟိုတယ်တခုတွင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် ညစာစားနေကြသည်။ (ခင်ပွန်း)- "မိန်းမ မင်းကို ပြောစရာတခု ရှိတယ်..." (ဇနီး)- "အိုး ရှင်ကလည်း ထမင်းစားနေတဲ့အချိန် စကားပြောတာ မသင့်တော်ပါဘူး..." အစာစားပြီးသည့်နောက်... (ဇနီး)- "ကဲ ပြောတော့ ဘာပြောမလို့လဲ...?" (ခင်ပွန်း)- "ဘာမှ မဟုတ်တော့ပါဘူးကွာ... စောစောက မင်းစားနေတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ပိုးဟပ်တကောင်တွေ့တာ ပြောမလို့..." (ဇနီး)- " ...." ဘ၀အမောတွေ ပြေနိုင်ကြပါစေ... #လွမ်းမပြေသုတရပ်ဝန်း https://www.facebook.com/လွမ်းမပြေ-သုတရပ်၀န်း-261095713945011/ lwanmapyay.blogspot.com
By လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း Wednesday, November 03, 2021
၅ နှစ်အရွယ် သမီးငယ်က မိခင်ဖြစ်သူကို မေးသည်။ "မေ့မေ့ဆံပင်တွေ နည်းနည်း ဖြူနေတယ်... ဘာဖြစ်လို့လဲ...မေမေ...?" မိခင်ဖြစ်သူက ပြုံးပြီး ပြန်ဖြေသည်။ "သမီးက မေ့မေ့ကို ၀မ်းနည်းအောင် လုပ်လို့ပေါ့... မေ့မေ့ကို ၀မ်းနည်းအောင် တခါလုပ်ရင် မေ့မေ့ဆံပင်တချောင်း ဖြူတယ်..." သမီးငယ်က အံ့အားသင့်သွားပြီး... "ဝိုး... ဒါဆိုရင် ဖွားဖွားဆံပင်တွေ အကုန်ဖြူနေတာ မေမေ ဖွားဖွားကို ဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲဟင်...?" " ...." ဘ၀အမောတွေ ပြေနိုင်ကြပါစေ... #လွမ်းမပြေသုတရပ်ဝန်း https://www.facebook.com/လွမ်းမပြေ-သုတရပ်၀န်း-261095713945011/ lwanmapyay.blogspot.com
By လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း Monday, October 25, 2021
အလုပ်မှာရှိနေတဲ့ ခင်ပွန်းသည်က သူ့အိမ်ကို ဖုန်းလှမ်းဆက်သည်။ (ခင်ပွန်း)- "မိန်းမ မင်းဘယ်မှာလဲ...?" (ဇနီး)- "အိမ်မှာပဲလေ ယောကျ်ားရဲ့..." (ခင်ပွန်း)- "သေချာလား မိန်းမ...?" (ဇနီး)- "သေချာတာပေါ့ ယောကျ်ားရဲ့...?" (ခင်ပွန်း)- "ဒါဆိုရင် မီးဖိုခန်းထဲက မွှေစက်(Blender)ကို ဖွင့်ပြ..." ဇနီးသည်က မွှေစက်(Blender)ကို ဖွင့်ပြလိုက်သည်။ "ဂျရီး ဂျရီး ဂျရီး ဂျရီး...." (ခင်ပွန်း)- "အော် အိုကေ... Goodbye ဟန်နီ..." နောက်တနေ့... (ခင်ပွန်း)- "မိန်းမရေ မင်းဘယ်မှာလဲ...?" (ဇနီး)- "အိမ်မှာပဲပေါ့ ယောကျ်ားရဲ့..." (ခင်ပွန်း)- "သေချာရဲ့လား မိန်းမ...?" (ဇနီး)- "သေချာတောပေါ့ ယောကျ်ားရဲ့..." (ခင်ပွန်း) "ဒါဆိုရင် မီးဖိုခန်းထဲက မွှေစက်(Blender)ကို ဖွင့်ပြ..." ဇနီးသည်က မွှေစက်(Blender) ကို ဖွင့်ပြလိုက်သည်။ "ဂျရီး ဂျရီး ဂျရီး ဂျရီး...." (ခင်ပွန်း)- "အိုကေ... Goodbye ဟန်နီ... I love you..." နောက်တနေ့တွင် ယောကျ်ားဖြစ်သူသည် အိမ်ကို တိတ်တဆိတ် ပြန်သွားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အိမ်ရောက်သည့်အခါ သား